သရဲနီတပ်သားဟောင်း ဖာဒီနန်ပြောတဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီအကြောင်း – Sport Gaber
ကျွန်တော်တို့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း ရီယို ဖာဒီနန်ကတော့ သူတို့ခေတ်ကမန်ချက်စတာဒါဘီနဲ့ ယခုအချိန် အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဖာဒီနန်က “ဒီဘက်‌ခေတ်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေက ကျွန် တော်တို့တုန်းကနဲ့မတူတော့ပါဘူး။ အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တုန်းကလိုဘဲမျှော်လင့်ထားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။
ပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တုန်းက နမ်းတာ၊ဖက်တာတွေလုပ်လေ့မရှိပါဘူး။ မန်စီးတီးကစာသမားဘဲဖြစ်ဖြစ်၊လီဗာပူးလ်ကစားသမားတွေနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူနဲ့မှဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ အဲ့အချိန်တုန်းက သူတို့နဲ့ကျွန် တော်တို့ကခါးသီးတဲ့ပြိုင်ဖက်တွေပါ။ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကိုဆို တစက်ကလေးမှသဘောမကျပါဘူး။
အဲ့အချိန်တုန်းက လက်စ်ကော့၊ ကွန်ပနီ၊ ဂျိုးဟတ်၊ ဂါရတ်ဘေးတို့နဲ့ ခင်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအဲ့သည်လောက်ရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ အခုကလေးတွေဘာလို့ဒီလောက် ရင်းနှီးဖော်ရွေနေကြလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ပေမယ့်လည်း သူတို့မျိုးဆက်တွေကဒီလိုဘဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလုပ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး ကျွန်တော်ပထမဆုံးကစားရတဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ၃ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့တာပါ။ပွဲပြီးတော့အဝတ်လဲခန်းထဲကို Ruud Van Nistelrooy ကပွဲအပြီးမှာလဲဝတ်ခဲ့တဲ့မန်စီးတီးဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီးဝင်လာပါလေရော။
ဆာအဲလက်စ်တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ဒေါသထွက်သလဲဆိုရင် သူ့တစ်ကိုယ်လုံး နီတာကိုကျော်ပြီးခ ရမ်းရောင်ပါပြောင်းသွားလောက်အောင်ကိုပေါက် ကွဲပါလေရော ဆာအဲလက်စ်ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့
“ဒါဘီပွဲပြီးပြီဆိုတိုင်းဒီအဝတ်လဲခန်းထဲကို အဲ့ကောင်တွေအသင်းအင်္ကျီနဲ့ ဘယ်တော့မှဝင်မလာခဲ့နဲ့ ! ဘယ် တော့မှနော်!”
အဲဒီ့အဖြစ်အပျက်ပြိီးကတည်းက မန်ချက်စတာဒါဘီမှာဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်တာတွေ၊အင်္ကျီချင်းလဲတာတွေအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိသွားတော့တာပါဘဲဗျာ။” ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကြှနျတောျတို့ ယူနိုကျတကျကစားသမားဟောငျး ရီယို ဖာဒီနနျကတော့ သူတို့ခတျေကမနျခကြျစတာဒါဘီနဲ့ ယခုအခြိနျ အကွောငျးကိုပွောပွခဲ့ပါတယျ။ ဖာဒီနနျက “ဒီဘကျ‌ခတျေမြိုးဆကျသဈကလေးတှကေ ကြှနျ တောျတို့တုနျးကနဲ့မတူတော့ပါဘူး။ အခွအေနတှေကေိုကြှနျတောျတို့တုနျးကလိုဘဲမြှောျလငျ့ထားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာ ကြှနျတောျသိပါတယျ။
ပှဲပွီးရငျကြှနျတောျတို့တုနျးက နမျးတာ၊ဖကျတာတှလေုပျလေ့မရှိပါဘူး။ မနျစီးတီးကစာသမားဘဲဖွဈဖွဈ၊လီဗာပူးလျကစားသမားတှနေဲ့ဘဲဖွဈဖွဈ ဘယျသူနဲ့မှဒါမြိုးမလုပျပါဘူး။ အဲ့အခြိနျတုနျးက သူတို့နဲ့ကြှနျ တောျတို့ကခါးသီးတဲ့ပွိုငျဖကျတှပေါ။ကြှနျတောျတို့ သူတို့ကိုဆို တစကျကလေးမှသဘောမကပြါဘူး။
အဲ့အခြိနျတုနျးက လကျဈကော့၊ ကှနျပနီ၊ ဂြိုးဟတျ၊ ဂါရတျဘေးတို့နဲ့ ခငျပမေယျ့ ကြှနျတောျတို့အခငြျးခငြျးအဲ့သညျလောကျရငျးရငျးနှီးနှီးမရှိခဲ့ကွပါဘူး။ အခုကလေးတှဘောလို့ဒီလောကျ ရငျးနှီးဖောျရှနေကွေလဲဆိုတာကြှနျတောျနားမလညျပမေယျ့လညျး သူတို့မြိုးဆကျတှကေဒီလိုဘဲဆိုတာကိုတော့ ကြှနျတောျနားလညျပေးလို့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ကြှနျတောျသာဆိုရငျတော့ဒါမြိုးလုပျဖွဈမယျမထငျပါဘူး ကြှနျတောျပထမဆုံးကစားရတဲ့ မနျခကြျစတာဒါဘီတုနျးက ကြှနျတောျတို့ ၃ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့တာပါ။ပှဲပွီးတော့အဝတျလဲခနျးထဲကို Ruud Van Nistelrooy ကပှဲအပွီးမှာလဲဝတျခဲ့တဲ့မနျစီးတီးဝတျစုံကွီးဝတျပွီးဝငျလာပါလရေော။
ဆာအဲလကျဈတဈယောကျ ဘယျလောကျဒေါသထှကျသလဲဆိုရငျ သူ့တဈကိုယျလုံး နီတာကိုကြောျပွီးခ ရမျးရောငျပါပွောငျးသှားလောကျအောငျကိုပေါကျ ကှဲပါလရေော ဆာအဲလကျဈကဘာပွောခဲ့လဲဆိုတော့
“ဒါဘီပှဲပွီးပွီဆိုတိုငျးဒီအဝတျလဲခနျးထဲကို အဲ့ကောငျတှအေသငျးအငျ်ကြီနဲ့ ဘယျတော့မှဝငျမလာခဲ့နဲ့ ! ဘယျ တော့မှနောျ!”
အဲဒီ့အဖွဈအပကြျပွီးကတညျးက မနျခကြျစတာဒါဘီမှာဖကျပွီးနှုတျဆကျတာတှေ၊အငျ်ကြီခငြျးလဲတာတှအေတှကျနရောမရှိဘူးဆိုတာ ကြှနျတောျသိသှားတော့တာပါဘဲဗြာ။” ဆိုပွီးပွောပွခဲ့ပါတယျ။
လင်ဂတ်ရယ့် အသက်28နှစ်ပြည့်တဲ့ မွေးနေနှင့် စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အပတ်စဉ် ၂ ပထမညပွဲများ (ပွဲကြို...